Zilbercoin စျေး - အွန်လိုင်း ZBC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zilbercoin (ZBC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zilbercoin (ZBC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zilbercoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $208 251.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zilbercoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zilbercoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZilbercoinZBC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00149ZilbercoinZBC သို့ ယူရိုEUR€0.00127ZilbercoinZBC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00114ZilbercoinZBC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00136ZilbercoinZBC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0135ZilbercoinZBC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00944ZilbercoinZBC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0334ZilbercoinZBC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00559ZilbercoinZBC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.002ZilbercoinZBC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00209ZilbercoinZBC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0334ZilbercoinZBC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0116ZilbercoinZBC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00809ZilbercoinZBC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.112ZilbercoinZBC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.251ZilbercoinZBC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00205ZilbercoinZBC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00226ZilbercoinZBC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0466ZilbercoinZBC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0104ZilbercoinZBC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.158ZilbercoinZBC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.78ZilbercoinZBC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.566ZilbercoinZBC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.11ZilbercoinZBC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0413
ZilbercoinZBC သို့ BitcoinBTC0.0000001 ZilbercoinZBC သို့ EthereumETH0.000004 ZilbercoinZBC သို့ LitecoinLTC0.00003 ZilbercoinZBC သို့ DigitalCashDASH0.00002 ZilbercoinZBC သို့ MoneroXMR0.00002 ZilbercoinZBC သို့ NxtNXT0.11 ZilbercoinZBC သို့ Ethereum ClassicETC0.000217 ZilbercoinZBC သို့ DogecoinDOGE0.433 ZilbercoinZBC သို့ ZCashZEC0.00002 ZilbercoinZBC သို့ BitsharesBTS0.0591 ZilbercoinZBC သို့ DigiByteDGB0.0567 ZilbercoinZBC သို့ RippleXRP0.00518 ZilbercoinZBC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00005 ZilbercoinZBC သို့ PeerCoinPPC0.00517 ZilbercoinZBC သို့ CraigsCoinCRAIG0.684 ZilbercoinZBC သို့ BitstakeXBS0.064 ZilbercoinZBC သို့ PayCoinXPY0.0262 ZilbercoinZBC သို့ ProsperCoinPRC0.188 ZilbercoinZBC သို့ YbCoinYBC0.0000008 ZilbercoinZBC သို့ DarkKushDANK0.482 ZilbercoinZBC သို့ GiveCoinGIVE3.25 ZilbercoinZBC သို့ KoboCoinKOBO0.351 ZilbercoinZBC သို့ DarkTokenDT0.00138 ZilbercoinZBC သို့ CETUS CoinCETI4.33